JINGHPAW KASA: ကေအိုင်အေနှင့် တအောင်းမျိုးချစ်ရဲဘော်များ ပူပေါင်းပြီး ဗမာစစ်တပ်နှင့်တိုက်
ကေအိုင်အေနှင့် တအောင်းမျိုးချစ်ရဲဘော်များ ပူပေါင်းပြီး ဗမာစစ်တပ်နှင့်တိုက်
အောက်တိုဘာ (၅) သောကြာ
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၄)၊ တပ်ရင်း (၃၄) နယ်မြေဖြစ်သော နမ့်ဆိုင်းတွင် အောက်တိုဘာလ (၄) ရက် မနက် (၁၀း၀၀) နာရီ မှ နေ့လည်း (၁း၀၀) နာရီအတွင်း ထိုးစစ်ဆင်လာသော ဗမာအစိုးရစစ်တပ် ခမရ (၅၀၂) နှင့် တအောင်း မျိုးချစ်ရဲဘော်များ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ တိုက်ပွဲတွင် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်ဘက်မှ (၁၀) ဦးသေဆုံးပြီး၊ (၇) ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဤတအောင်း မျိုးချစ်ရဲဘော်များသည် ကေအိုင်အိုအစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဗမာအစိုးရစစ်တပ်များကို ခုခံတိုက်ခိုက်နေသော မျိုးချစ်ရဲဘော်များလည်း ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်း သိရှိရပါသည်။
There was (10) Burmese soldiers killed and (7) wounded in Northern Shan State region’s intrusion battle by Burmese Government’s troop, according to the KIA frontline report. The Burmese Government’s Light infantry unit (502) troop invaded forcefully in the KIA controlled areas of No (34) Battalion, Under the KIA (4) Brigade on October 4,2011. Thus, the KIA (34) Battalion and the allied Ta'ang Liberation army made resistance battle between 10:00 AM to 1:00 PM on that day. The Ta'ang Liberation army is patriotic and joins with the KIA and defense the Burmese Government invader troops in Northern Shan State Areas.
GARA SHIGA DAP KAW NA MARA AI KUN?
မင်းတို့သေတယ်လို့ကိုမရှိဘူး သေနတ်များပီးကြသလား အဆောင်လေးဘာလေးရှိယင် ပြောစမ်းပါအုံး
Ngai na mobile gaw myen front n Mai na grai yak sai law jinghpaw kasaeJP hku ma Loi ka sha lawn ya tit
bd seng said...
jp hku mai ai web hpaw ya na nga naw ndau yarit jinghpaw kasaechyeju hte
N,shung sama ni she wai nga mat tiM majan dams ni
Mung naw wai rai nga ai le
myen laika nmai hti ai hpu nau wa iphone hte ipad nga jang gaw MOGOK hpe download galaw na dai Browser kaw na myen laika hte ka da ai News ni mai hti ai. PC kaw na nga jang gaw myen font download galaw na mai yu ai re.
ipad ni n lu ga ai law nokia moi na sha lang ga ai majaw le